Zvinyorwa zvaDiaz Nesamoney pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Diaz Nesamoney
Diaz Nesamoney inyanzvi yehunyanzvi muzvinabhizimusi akavamba makambani matatu akabudirira eetekinoroji, ese achishandisa simba redata kumabhizimusi emagetsi uye kunyorera vatengi Parizvino, Diaz ndiye Muvambi, Mutungamiri uye CEO we Jivox, kambani inopa tekinoroji chikuva chekushambadzira kwakasarudzika kushambadzira uye kushambadzira. Diaz ndiye zvakare munyori webhuku rekutanga pakushandisa data uye tekinoroji ku gadzirisa kushambadzira kwedhijitari.
Kana isu tikapinda muUber app yedu, inoburitsa otomatiki nzvimbo dzatichangosvika. Patinoshanyira webhusaiti yembatya, tinoona zvinhu zvakakurudzirwa kubva pane zvatakatenga kare. Kana tikatarisa giya rekumisasa pamhepo, tinopihwa nekukasira kupihwa mabhena ekushambadza echinhu ichocho. Kana tikavhura Google kana Apple Mepu, tinopihwa nzvimbo dzinowanzoshanyirwa zvichienderana nenguva nenzvimbo iripo. Izvo zvese nezvemunhu uye zvese zvinoenderana nechinhu chimwe chete -